အိတ်စုဆောင်းဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ်ဘိလပ်မြေ Dacron မြေမှုန့် China Manufacturer
Dacron ဖုန် Bag စုဆောင်းခြင်း Cement,ဖုန်စုစည်းမှုများအတွက် Bag Filter,ဘိလပ်မြေဖုန် Filter ကို Bag
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: Dacron ဖုန် Bag စုဆောင်းခြင်း Cement,ဖုန်စုစည်းမှုများအတွက် Bag Filter,ဘိလပ်မြေဖုန် Filter ကို Bag
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > အိတ်စုဆောင်းခြင်းမြေမှုန့် > အိတ်စုဆောင်းဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ်ဘိလပ်မြေ Dacron မြေမှုန့်
 အိတ်စုဆောင်းဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ်ဘိလပ်မြေ Dacron မြေမှုန့်
polyester အပ်ဝမ်းနည်းဖိုင်ဘာနှင့်အတူလှပစွာသည်နှင့်ကွာဟမှုယူနီဖောင်းဒဏ်ငွေဖိုင်ဘာအထည်များတွင်ဖြန့်ဝေသောနည်းပညာ, needling မဟုတ်သောရက်များတွင်အသုံးပြုသည်လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်။ needled ၏မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ချောမွေ့ချောမွေ့ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဖုန်မှုန့်အမှုန်များက filtered ခံရဖို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်နိုင်အောင် polyester အဓိကဖိုင်ဘာနှင့် polyester ကြိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်ပူကိုလှိမ့, ကိုမီးရှို့သို့မဟုတ်အပေါ်ယံပိုင်းပြီးနောက်ကုသခံစားရတယ်။ အဆိုပါပစ္စည်းအကြီးစားလေကြောင်းရန်ကွာဟမှု, ကောင်းမွန်သောဝေဟင် permeability, ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောဆန့်ကျင်ဓာတုတည်ငြိမ်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်အပူချိန်မှာဓာတ်ငွေ့ filter, ဒါပေမယ့်လည်းအက်ဆစ်များတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဓာတ်ငွေ့ filter နိုင်ပါတယ်မသာ။ ဒါဟာရေ filter နှင့်ရေနံ filter နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်အပူချိန်၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးစံပြ filter ကိုပစ္စည်း, အရည်အစိုင်အခဲခွဲခြာနှင့်အခြားလယ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။
polyester များအတွက်အထည်အိတ် dedusting ၏စျေးနှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ခံစားခဲ့ရ needled:
လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် 1. polyester အပ်ဖုန်မှုန့်အိတ်နိုင်အောင်ပြင်းထန်စွာနှင့်အညီအမျှဖြန့်ဝေထားတဲ့အတိုနဲ့အတိုအမျှင်၏ဖန်ဆင်းထားသည်ခံစားရတယ်။ အဆိုပါ porosity ရက် filter ကိုအထည်၏အဖြစ်နှစ်ကြိမ်လောက်သောအရာ 70% ဖြစ်ပါတယ်။
3. polyester အပ်၏မျက်နှာပြင်ထည်အိတ်ပူကိုလှိမ့နှင့်မနာသီချင်းဆိုသို့မဟုတ်အပေါ်ယံပိုင်းများကကိုလက်စသတ်နေသည်ခံစားရတယ်။ ဒါဟာချောမွေ့ချောမွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံဖော်ဖို့လွယ်ကူပုံပျက်သောရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့် dedusting ဖို့လွယ်ကူပါလိမ့်နှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝရှိပါတယ်လို့မရပါဘူး။
4. လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်အဆိုပါ polyester အပ်အိတ် ESD အဆိုပါ anticorrosive ပေါက်ကွဲမှုမီးဖိုထဲဓာတ်ငွေ့နှင့်ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံအိတ်ကနေပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်ထားပြီးနှင့်တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ function ကိုဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတယ်။
polyester မြေမှုန့်စုစည်းအိတ် parameters များကို:
gram အလေးချိန်: 500g / m2 ထက် ပို.
Air ကို permeability:> 8-12m3 / m2.min
ဒီဂရီမျဉ်းဆွဲ:> 900N /5* 20cm
Latitudinal တင်းမာမှု:> 1500 N က /5* 20cm
Latitudinal elongated: <45%
အပူချိန်ကိုသုံးပါ: စင်တီဂရိတ် 150 ဒီဂရီ
Post ကိုကုသမှု: setting ကို, ငြိမ်သက်နှင့်ရေစိုခံ
Related Products List: Dacron ဖုန် Bag စုဆောင်းခြင်း Cement , ဖုန်စုစည်းမှုများအတွက် Bag Filter , ဘိလပ်မြေဖုန် Filter ကို Bag , Anticorrosion ဖုန် Bag ကေ့စုဆောင်းခြင်း , SIMCO ဖုန် Rotary Valve စုဆောင်းခြင်း , အမျိုးအစားဖုန် Bag စုဆောင်းခြင်း Filter , စက်မှု Bag စုဆောင်းခြင်းစက် , အိတ်စုဆောင်းခြင်း High Quality ဖုန်